အမျိုးအစား: Java ကို
ငါ javarush subscription ကိုဝယ်သင့်ပါသလား။ ? javarush.ru ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့် java programmer တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်သလား။ ဒီနေ့ခေတ်မှာအရာအားလုံးကိုအခမဲ့သင်ယူနိုင်တယ်။ ကြေးပေးသွင်းဝယ်ယူမှုအနတ္တဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်သင်တကယ် code လုပ်ချင်ရင် ...
ကုမ္ပဏီ Geekbrains အကြောင်းကိုမဆိုတုံ့ပြန်ချက်ရှိပါသလား? ယောက်ျားတွေ, ကျောင်း Geekbrains နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူမည်သူမဆို? ငါစိတ်ဝင်စားထိ မိ. လဲ။ သင်ယူသိပ်နောက်ကျဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ ငါ 30 နှစ်များတွင်တစ်ဦးပရိုဂရမ်မာဖြစ်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ဒါဟာအတော်လေးကြာခင်မှာ ...
အဆိုပါ PC မှာဘယျလိုဟာ android emulator ပိုကောင်း? အကောင်းဆုံး-Genimotion ပေမယ့် (အခမဲ့ဗားရှင်းတစ်ခုအခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်) နှင့်မျှမှတ်ပုံတင်လိုအပ်ပြီး! အဆိုပါဒုတိယနေရာငါ BlueStacks ထားမယ်လို့အခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး! အဆိုပါ emulator, ကောင်းတစ်ဦးဂရပ်ဖစ်ကဒ်လိုအပ်ပါတယ် ...
MURANI ကဘယ်သူလဲ ဓာတ်ပုံတွေပို့ပြီးသိတဲ့သူတွေကိုပြောပြပါ။ နည်းနည်း moray ငါးရှဥ့်။ Muranyi သည်ထိပ်တန်းကော်ပိုရေးရှင်းမှဖန်တီးခဲ့သော Cleito ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသည့်မိန်းကလေးများဖြစ်ပြီးပါမောက္ခ Radomsky နှင့်သူ၏လက်ထောက်ဖြစ်သည်။
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,225 စက္ကန့်ကျော် Generate ။